Muzvinafundo Moses Rumano Voita Bhizinesi reKurima muAmerica
Kurume 03, 2021
Doctor Moses Rumano
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, Muzvinafundo Moses Rumano, vanoti rudo rwavo rwechikafu chekumusha rwakaita kuti vatsvage munda wekurima zvirimwa zvakaita sechibage, mirivo, vachitengesera vanoda zvirimwa izvi.
Doctor Rumano, avo vandzidzisa paFriends University mudunhu reKansas, vanoti bhizimusi ravo rapfumbira zvikuru panguva ino yeCovid-19 sezvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kufarira zvirimwa zvinovaka muviri uye zvinozvifungisa kumusha.
Muriwo Uri Kurimwa naDoctor Rumano
Doctor Rumano vanoti vari kugadzira maputi avanotengesa padandemutande ayo ari kufarirwa nevazhinji.
Vanoti zvakakosha kuti vanhu vaite mamwe mabasa emawoko anovafadza sezvavari kuita ivo nekurima.
"Ndiri kufara nemafambiro ari kuita mabasa angu ekurima pari zvino uye ndatoona bhizinesi rangu richikura panguva ino yeCovid-19, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvichifarira zvandiri kugadzira," vadaro VaRumano.
Doctor Rumano vanoti vakakurira kumusha kwavakadzidza kurima mbesa dzakasiyana siyana uye pari zvino vave nekambani inogadzira maputi nekugaya hupfu hwechibage chavanorima.
Vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvizhinji zviri kufarira hupfu hwemugaiwa hunogadzirwa nekambani yavo.
Hurukuro naDoctor Moses Rumano
VaPhillip Chiyangwa Vokokera Komiti yeZanu PF Ichatsvaga Mari yeKuona Kuti VaMNangagwa Vadzoserwa paNyanga Muna 2023
Zimbabwe Inotambira Nhomba dzeSinopharm Mazana Masere eZviuru
Inflation Yodzika Asi Hurombo Horamba Huri Munyika
Vari Kunze kweNyika Vanobatana muKunamatira Nyika Kuti Inunurwe Kubva kuDenda reCovid-19
Hurumende Inoti Mutemo we‘Level 4 Lockdown’ Uchamboramba Uripo